The Ab Presents Nepal » नेपालमै यस्तो मन्दिर छ जहाँ तुरुन्तै जोडी मिलाउने देखी जे माग्यो त्यही सम्म प्राप्त हुन्छ ! तपाई पनि दर्शन गरी भेटि सरूप १ शेयर गर्नुहोस
नेपालमै यस्तो मन्दिर छ जहाँ तुरुन्तै जोडी मिलाउने देखी जे माग्यो त्यही सम्म प्राप्त हुन्छ ! तपाई पनि दर्शन गरी भेटि सरूप १ शेयर गर्नुहोस
दुप्चेश्वर महादेव मन्दिर नुवाकोट जिल्ला को राउतबेसी गाविसमा अवस्थित धार्मिक पर्यटकीय स्थल हो । विशेषगरी जोडी जुराउन र सन्तान माग्नकै लागी यस स्थानमा भक्तजनहरु दुप्चेश्वर महादेव पुग्ने गर्दछन् । सदरमुकाम विदुरदेखि पूर्वमा रहेको राउतवेंशी गाविसको दुप्चेश्वर महादेवको मन्दिरमा यस्तो आस्था बोकेर जाने भक्तजनको आकर्षणले पछिल्लो समयमा सांस्कृतिक तथा धार्मिक महत्वलाई उजागर समेत गरिरहेको छ ।हरेक वर्षको पुस महिनामा धान्यपूर्णिमाका अवसरमा साताव्यापी विषेश मेला, शिवरात्री, साउन महिना तथा हरेक सोमबार दुप्चेश्वर मन्दिरमा मेला लाग्ने गर्दछ ।यहाँ मुख्यतः सन्तान नहुने दम्पतिहरु सन्तान माग्न आउने र महादेवको भक्तिपछि दैवी शक्तिले सन्तान प्राप्त हुने विश्वास गरिन्छ । धान्यपूर्णिमादेखि एकसाता लाग्ने मेलालाई परम्परादेखि चल्दै आएको मेला नेपालकै सन्दर्भमा भने अलि अनोठो र फरक छ ।
दुप्चेश्वर महादेवको उत्पत्ति पौराणिक कथनअनुसार चारसय वर्षअघि स्थानिय एक तामाङको दुहुनो गाई गोठालोमा हराएपछि खोजी गर्दै जाँदा छङ्गाछुरको पहरोमा आफ्नो चारै थुनबाट दुध चढाइरहेको भेटिएपछि सो ठाउँमा दुप्चेश्वर महादेव रहेको विश्वासमा प्रत्यक वर्ष धान्यपूर्णिमाका दिन विषेश मेला लाग्दै आएको छ।अर्कोतर्फ, समुन्द्र मन्थनपछि निस्किएको कालकुट विष सेवनले रन्थनिएका महादेव गोसाइकुण्ड जाँदा दुप्चेश्वरमा आएको जनश्रुती पाइन्छ । त्यसैले सोही स्थानमा दुधेश्वर महादेव उत्पती भएका र पछि अपभ्रश भई दुप्चेश्वर नामाकरण भएको अर्को किंवदन्ती पाइन्छ ।दुप्चेश्वर महादेवको मेला भर्न राजधानी काठमाण्डौं, धादिङ, रसुवा, सिन्धुपाल्चोक, मकवानपुर, गोरखा, चितवन लगायत देशका विभिन्न भागहरुबाट यहाँ वर्षेनी हजारौँ दम्पती भक्तजनहरु महादेवसँग सन्तान माग्न आउने गरेका छन् ।
धार्मिक पर्यटनको गन्तव्यको रुपमा गतिलो सम्भावना बोकेको यस मेलामा तामाङ, शेर्पा जातिका परम्परागत संस्कृतिको प्रदर्शन रोचक र अनौठोसँग हेर्न पाइन्छ । दुप्चेश्वरलाई सन्तानेश्वर महादेवका रुपमा पुकार्दै आउने भक्तजनहरु दिनानुदिन बढ्दै गएको स्थानियवासीको भनाइ छ ।
दुप्चेश्वर सबै धर्मको आश्थाका केन्द्रसमेत मानिएकाले यस क्षेत्रको विकासमा विषेश पहल हुनुपर्ने स्थानियवासीहरुको माग छ ।सरकारी स्तरबाट यहाँ कुनैपनि पर्यटकिय महत्वको प्रचारप्रसार नभएकोले मेलाबाहेक अन्य समयमा यहाँ आउनेको संख्या अति नै न्यून रहेको दुप्चेश्वर मेला संरक्षण तथा व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ । दुप्चेश्वर महादेव जस्ता धार्मिक एवम् ऐतिहासिक सम्पदाको संवद्र्धन र प्रचारप्रसार गरी आन्तरिक एवम् वाह्य पर्यटकहरु भित्र्याउन सके नुवाकोटको मात्र नभई राष्ट्रिय आर्थिक समुन्नतिमा महत्वपूर्ण देन रहने बुद्धिजिवीहरुको विश्वास छ ।
अन्य समाचार,डा.मिना झा भन्नुहुन्छ महिलाको मासुपलाउदै मा पाठेघर नै काटेर फाल्नु पर्दैन, यसरी सजिलै सँग सामाधान गर्न सकिन्छ ?तपाइ पनि एक शेयर गर्नुहोस ! बनेपाकी ३० वर्षीया शर्मिला (नाम परिवर्तन) लगातार रक्तश्राव भएपछि चिकित्सककहाँ पुगिन्। अल्ट्रासाउण्ड गरेपछि चिकित्सकले भने, ‘पाठेघरमा मासु पलाएको छ, तुरुन्त अप्रेशन गर्नुपर्छ ।’ एक सन्तानकी आमा शर्मिला चिकित्सकको कुरा सुनेर आत्तिइन्। उनले औषधि खाएर निको हुन्छ कि ? भनेर सोधिन् पनि। तर, चिकित्सकले पाठेघरमा मासु पलाएकोले पाठेघरै फाल्नुपर्ने दोहो¥याए।दोस्रो सन्तानको योजनामा रहेका शर्मिला र उनका पतिका लागि सुखद् समाचार थिएन यो । उनको उमेर पनि त ३० वर्ष मात्रै थियो। चिकित्सकले अप्रेशनबाहेक अर्को उपाय नभएको बताएपछि उनीहरुले अप्रेशनका लागि मिति समेत लिए।
अपे्रेशनको मिति जति नजिक आयो, चिन्तापनि थपिंदै गयो। पहिलो मिति बहाना बनाएर टारे। अस्पतालले अर्को मिति दियो । अस्पतालले पटक–पटक फोन गरेर अपे्रशनका लागि बोलाइरह्यो । तर, मनले नमानेपछि उनीहरुले अन्य ३÷४ जना काठमाडौंका नाम चलेका स्त्री रोग विशेषज्ञसँग जाँच गराए।शर्मिलाले भनिन्, ‘अधिकांश चिकित्सकले औषधि खाएर निको हुन्छ भनेपछि मेरो मन ढुक्क भयो। नत्र मलाई राति निद्रा नपर्ने, चिन्ता लागिरहने समस्या भयो। झण्डै डिप्रेशन भएको।
स्वास्थ्यखबरको सम्पर्कमा आएका यी दुई महिलाको विषयपछि स्वास्थ्यखबरले प्रसूति तथा स्त्रीरोग विशेषज्ञसँग चासो रोखेको थियो । सो क्रममा यी महिलाजस्तै धेरै महिलालाई चिकित्सकले पाठेघर नै फाल्नुपर्छ भनेर कर लगाउने गरिएको भेटियो। स्त्री रोग विशेषज्ञकहाँ पुग्ने धेरै महिलामा पाठेघरको मुखमा मासु पलाउने समस्या देखिन्छ।
पाठेघरमा मासु किन पलाउँछ ?पाठेघरमा मासु पलाउने बित्तिकै शल्यक्रिया आवश्यक छ वा छैन ? यिनै विषयमा परोपकार प्रसुति तथा स्त्रीरोग अस्पतालमा २५ वर्षदेखि कार्यरत स्त्री रोग विशेषज्ञ डा. मीना झासँग गरिएको कुराकानी।पाठेघरमा मासु किन पलाउँछ ? पाठेघरमा मासु पलाउनुको कारण यही नै हो भन्ने छैन। वंशाणुगत कारणले पनि हुन्छ। कतिपय अवस्थामा थाहा नै हुँदैन। अन्य समस्या लिएर अस्पताल आएका महिलालाई समस्याका आधारमा जाँच गरेपछि मात्र थाहा हुन्छ पाठेघरमा मासु पलाएको रहेछ भनेर।
पाठेघरमा मासु पलाएको कसरी थाहा पाउने, यसका लक्षण के–के हुन् ? पाठेघरमा मासु पलाएको शंका गर्ने प्रमुख कारण महिनावारी हुँदा धेरै रगत जानु, अत्याधिक पेट दुख्नु हो । महिनावारी हुँदा सामान्यतः५÷६ दिनमा श्राव बन्द हुनुपर्छ । तर, यस्तो समस्या भएका महिलालाई धेरै दिनसम्म रक्तश्राव भइरहन्छ । बीचमा रोकिएर फेरि श्राव हुने सम्भावना पनि हुन्छ ।पेट अत्यधिक दुख्ने तथा रगत धेरै बग्दा त्यसले अन्य समस्या पनि ल्याउँछ । शरीरमा रगतको कमी भएर एनिमिया हुने, सेतो पानी बग्ने, कमजोरी हुने, थकाई लाग्ने, रिगंटा लाग्ने, कतिपयलाई सन्तान नहुने, गर्भ रहे पनि तुहिने समस्या हुन्छ । हामीकहाँ महिलाहरु धेरै रगत बग्यो, महिनावारी हुँवा वा अन्य समयमा पनि अत्यधिक पेट दुख्यो, सन्तान भएन, गर्भ रहन्छ तर खेर गइरह्यो भन्ने जस्ता समस्या लिएर आउँछन् । उनीहरुलाई जाँच गरेपछि पाठेघरमा मासु पलाएको थाहा हुन्छ । हामीले उनीहरुसँग सोधपुछ गरी र अल्ट्रासाउण्ड गरेर निश्चित गर्छौं।
धेरै चिकित्सकले पाठेघरमा मासु पलाउने बित्तिकै पाठेघर फाल्नुपर्छ भनेको सुनिन्छ, यसको उपचार अपे्रशन मात्र हो ? राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो । बिरामीको अवस्था र आवश्यकता हेरी उपचार हुन्छ। धेरै महिला अन्य थुप्रै ठाउँमा उपचार गराएर अन्तिममा प्रसूतिगृह आउँछन्।अन्य डाक्टरले पाठेघर तुरुन्त फाल्नुपर्छ भन्नुभयो, मलाई के भएको डाक्टरसाप?भनेर सोध्छन् । कसैको उमेर पनि कम नै हुन्छ। उनीहरुलाई पाठेघर झिक्नुपर्छ भन्दा डर लाग्नु स्वभाविक हो। सत्य त के हो भने पाठेघरमा मासु पलाउने बित्तिकै पाठेघर झिकेर फाल्नुपर्दैन।सामान्य शल्यक्रिया मायोमेक्टोमी अर्थात् मासु झिकेर फाल्न सकिन्छ। पलाएको मासु ठूलो छ अर्थात् ठूलो फ्याब्राइट छ भने मासु झिकेर बायोब्सी गरेर पनि निक्र्योल गरी उमेर पुगेको छ भने झिक्न सकिन्छ।
हामीले कम उमेर भएका,सन्तानको रहर नपुगेका, औषधि गरेर निको हुने अवस्थाका महिलाको पाठेघर सकेसम्म फाल्दैनौं। कति महिलाहरु आफैं पनि पाठेघर झिकिदिनुस् ढुक्क हुन्छ भन्छन्। तर, उनीहरुलाई औषधिले निको हुने अवस्था भएसम्म पाठेघर झिक्नुहुन्न भनेर सम्झाउने काम चिकित्सक हो। आजकल धेरै निजी अस्पतालमा पाठेघरसम्बन्धी समस्या हुनासाथ झिक्नुपर्छ भन्ने गलत अभ्यास भएको छ। झिक्नैपर्ने अवस्थाबाहेक अन्य अवस्थामा पाठेघर झिक्नुहुन्न। फालिसकेपछि त्यसले अझ धेरै समस्या निम्त्याउन सक्छ। सन्तान पूरा भएका, उमेर पुगेका, शल्यक्रियाबाहेक अन्य उपाय नभएका महिलाको हकमा भने मात्र फाल्नैपर्ने अवस्था हुन्छ।via nagriksamachar